MW CMC Oo Furay Shirka Qorshaha Horumarinta Xoolaha ee GTP2 - Cakaara News
MW CMC Oo Furay Shirka Qorshaha Horumarinta Xoolaha ee GTP2
Jigjiga ( Cakaaranews ) Arbaco, 4ta may 2016. Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka hoolka shirarka ee qaryaan dhoodaan ka furay shir lagaga wada hadlayay qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha wajigiisa labaad ee dhanka horumarinta xoolaha ee heer qaran iyo heer deegaan. Kaas oo socon doona mudo sadex maalmood ah.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, wasiiru dawlayaasha wasaarada Horumarinta xoolaha iyo Kaluumaysiga JDFI, marwo Dr Misraaq Mokonon iyo mudane Dr Gabre-isgaaber yohanis, Madaxwayne kuxigeenada DDSI, Golaha Kabineega, Maaamulka Degmooyinka iyo dhamaanba heerarka kaladuwan ee shaqaalaha xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer miyiga DDSI.
Furitaankii shirka ayaa waxaa madaxwaynaha madasha kusoo dhaweeyay wasiiru dawlaha wasaaraha horumarinta xoolaha iyo kaluumaysiga JDFI marwo Dr. Misraaq Mokonen.
Hadaba madaxwaynaha DDSI oo furay shirkan ayaa kahadlay muhiimada uu qorshahan horumarinta xoolo dhaqatada wajiga 2aad uu u leeyahay dalka iyo deegaankaba isagoo gaar ahaan xusay in isha kaliya ee nolosha bulshada Deegaanku ay kutiirsan tahay dhaqashada xoolaha. Wuxuuna madaxwaynuhu guriga kubooriyay in mudada uu socdo shirku ay si dhugleh u dhagaystaan soo-jeedinta qorshaha kadibna ay si cilmiyaysan uga doodaan qorshaha iyagoo waliba wakhtiga ilaalinaya.
Shirkan ayaa waxaa lagu maamusay halku-dhagyo ay kamid yihiin: anagoo raacayna habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha waxaan xaqiijinaynaa in shaqooyinka laga qabanayo dhinaca xoolaha iyo waxsoosaarkooda ay noqdaan kuwo saldhig u ah Horumarka Cagaaran, iyo waliba hirgalinta yoolasha qorshaha kobaca iyo isbadalka dhaqaalaha, doorka hogaaminta iyo xirfadlayaasha heerarkooda kaladuwan waa mid muhiim ah.
Ugudanabayna shirka ayaa ku sii soconaya jadwalkii loogu talagalay ee soo jeedinta qorshaha iyo ka doodistiisa.